Iindaba - Uyintoni Isiseko Somgangatho?
Uyintoni Isiseko Somgangatho?
Isiseko somgangatho sisamkeli seplagi esikumgangatho. Olu hlobo lwesokethi lunokwenziwa kwiintlobo ngeentlobo zeeplagi, kodwa zihlala zisetyenziselwa ukuqhagamshela ngombane, umnxeba, okanye intambo. Ukusetyenziswa kweziseko zomgangatho kulawulwa kakhulu ziikhowudi zokwakha kwiindawo ezininzi.
Iziseko zombane okanye iindawo ezimaxhaphetshu zihlala zibekwa ezindongeni.
Kwiimeko ezininzi, umbane kunye nezinye iintlobo zeesokethi okanye iivenkile zibekwe ezindongeni okanye kwiibhodi ezisezantsi. Kwigumbi lokuhlala eliqhelekileyo okanye kwigumbi lokuthengisa, ezo ziseko zihlala zibekwe umgama omfutshane ngaphezulu komgangatho kwaye zinokubekwa ngaphezulu kweentloko zokubala kumagumbi okuhlambela nasekhitshini. Ngokwakhiwa okusemgangathweni kwemizi-mveliso, uninzi lweendawo ezinjalo zibekwa eludongeni okanye kwiipali ezikufutshane noomatshini. Kwezinye iimeko, nangona kunjalo, isiseko somgangatho sinqweneleka kuba sithintela ukuqhutywa kweentambo kwiindawo ezinokuthi zibeke ingozi kuhambo.
Umzekelo, igumbi lokuhlala linokubunjwa ngendlela yokuba iisofa zingabinakubekwa eludongeni ngaphandle kokuthintela ukungena kwamanye amagumbi. Ukuba umninikhaya ufuna ukubeka isibane sokufunda kwelinye icala lesingqengqelo, kuya kufuneka agijime intambo enqumleza umgangatho kwindawo ekufuphi yodonga lombane. Oku kunokuba kungathandeki. Ingabeka umngcipheko wokuba isilwanyana sasekhaya okanye ilungu losapho liza kukhubeka ngentambo, elinokuthi lenze umonakalo kukubi kunye nakwisibane. Ukubekwa kwesokethi somgangatho kufutshane nesofa kususa le ngxaki.
Icala elisecaleni kwengqekembe kukuba iiplagi ezibekwe kumgangatho ongafakwanga kakuhle zinokuba ziingozi ngokwazo. Oku kuyinyani ngokukodwa kwizakhiwo zorhwebo nezorhwebo apho uxanduva luhlala luxhalabisa. Iziseko zomgangatho zikwacingelwa ngabaninzi ukuba zibeke umngcipheko omkhulu womlilo kuneesokisi zodonga.
Ukufaka iivenkile zomgangatho ngexesha lolwakhiwo olutsha kunokuba yinto enzima kwezinye iindawo zehlabathi. Iikhowudi ezininzi zokwakha ziyakwalela ukufakelwa kwesokethi somgangatho ngokupheleleyo. Abanye bayalela ukuba zifakelwe kuphela kumgangatho oqinileyo onje ngethayile okanye ukhuni hayi kumgangatho othambileyo ofana nekhaphethi. Abanye bavumela iivenkile zomgangatho kulwakhiwo lwamashishini kodwa hayi kulwakhiwo lokuhlala okanye lwentengiso, ngelixa abanye beyalela ngokuchaseneyo ngqo.
Ukufakela iingcingo okanye ukufaka isokethi somgangatho kwisakhiwo esele sikhona kungavunyelwa okanye kungavunyelwa ngekhowudi Ukuba kunjalo, ikhowudi inokufuna ukuba umsebenzi wenziwe ngumbane onelayisensi. Ukuba iikhowudi zasekuhlaleni ziyakuvumela ukufakelwa kweziseko zomgangatho, umnini wesakhiwo kufuneka akhumbule ukuba olo fakelo lunokubiza kakhulu okanye lungenakwenzeka ukuba umbane wombane akakwazi ukufikelela ngaphantsi komgangatho, njengakwimigangatho yesamente. Ukuba umgangatho ukwinqanaba lesibini, inxenye yesilingi engezantsi inokufuna ukususwa ukuze kufakelwe isokethi.